मोबाइल भरिएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी खाली गर्नुस् - hamro Desh
मोबाइल भरिएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी खाली गर्नुस्
धेरै जसो स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुको समस्या भने त्यसको प्रयाृग गर्दा जहाँ हुने मेमोरिको अभाव हो । अझ त्यस्ता स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताहरु समस्यामा पर्ने गर्छन जसकोमा मेमोरिकार्ड राख्न मिल्दैन ।
मेमोरि कम भएका कारण फोटो खिच्न , आफूलाई मनपरेको भिडियो, एपहरु डाउनलोड गर्न समस्या पर्ने गरेको छ भने त्यसको समस्या समाधानका केही उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
२. एपलाई microSD कार्डमा मूभ गर्ने
३. गुगल फोटोजको प्रयोग
४. क्लाउड स्टोरेजको प्रयोग
फोनको इन्टर्नल मेमोरीका सम्पूर्ण डाटाहरु क्लाउड स्टोरेजवाला एप्स जस्तै Dropbox, One Drive तथा Google Drive मा सार्न सकिन्छ । यी क्लाउड एप सुरक्षित तथा निशुल्क हुन्छन् । आफ्ना डाटालाई सधैभरका लागि सेभ गर्न सकिन्छ यहाँ र चाहिएको बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
५.लाइट एप्सको प्रयोग
Face, Messenger, YouTube जस्ता कैयन एपहरु फोनको इन्टर्नल मेमोरीमा इन्स्टल हुन्छन् । यी एपमा अपडेट पनि आइरहन्छन् । अपडेटले यी एपको साइजलाई कैयौँ गुणा बढाइदिन्छ । तर यी सबै एपको प्ले स्टोरमा लाइट भर्सन पनि उपलब्ध हुन्छ । लाइट भर्सनले कम स्पेस लिन्छ । साथै यसमा अपडेट धेरै नआउने भएकाले यसले फोनको स्पीडमा पनि असर गर्दैन । एजेन्सी